အနီရောင်အကွက်ထဲမှာဘာတွေပါလဲ။ - မြင့်မားသောရတနာအိပ်မက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2015
Valentine's Day (သို့မဟုတ်ခရစ်စမတ်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးနေ့ (သို့) ရိုးရိုးလေး!) ကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မိန်းကလေးများသည်လက်ဆောင်များကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အဖိုးတန်လက်ဆောင်များနှင့်ထိုထက်ပိုသည်ပိုကောင်းသူတို့အကွာအဝေးမှာငါတို့ရှိသမျှသည်အသိအမှတ်ပြုရန်သောအထင်ကရသေတ္တာများထဲမှလာလျှင် - အပြာ box ကို ... အနီရောင် box ကို ...
ယနေ့တွင်၎င်းသည်မင်းသား Cartier ၏အနီရောင်သေတ္တာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရတနာကိုယ်နှိုက်ကို ကျော်လွန်၍ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောဘဏ္casာတိုက်အထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည် - တစ်ခါတစ်ရံရတနာထက် ပို၍ ပင်မြတ်နိုးသည်!
ထို့နောက်အနီရောင်သေတ္တာကိုဖွင့ ်၍ မမေ့နိုင်သော“ အနီရောင်” ချစ်သူများနေ့အတွက်နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြပါစို့။
Cartier's ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပသည့်အခါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစုဆောင်းခြင်း ငါတို့မင်းသား Charming နှင့်အတူရှိစဉ်အခါငါတို့ကိုလက်ခံသောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်နွေးထွေးမှုအားလုံး evoke ရန်၎င်း၏အမည်ဖြင့်ရုံပြီးပြည့်စုံသောပုံရသည်။
ထံမှငွေစုဆောင်းမှုမတ်ေတာ Vogue ပြင်သစ်.
၁၉၇၀ နယူးယောက်ရှိကလေးငယ် LOVE ၏စုဆောင်းမှုသည်စည်းဝေးကြီးထက်ကျော်လွန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ ဝက်အူလှိုင်းများ၊ စံပြဘဲဥပုံပုံသဏ္elegာန်နှင့်ကြော့ရှင်းလှပမှုတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောအချစ်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်အမှတ်အသားပြုသည်။
ယင်း၏အထင်ကရရပ်တည်ချက်သည်ဆမ် Peckinpah ကိုရိုက်ကူးစဉ်ကပုံဖော်ခဲ့သောအလီ McGraw နှင့် Steve McQueen တို့၏အဖြစ်အပျက်ကဲ့သို့သူတို့၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်တူညီသောအထင်ကရစုံတွဲများရွေးချယ်ထားသည့်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ခြင်းမှလာသည် အဆိုပါထွက်ပြေးဖို့, 1972 ခုနှစ်တွင်ဒဏ္Legာရီအလီပစ်ခတ်မှုစဉ်အတွင်းလက်ကောက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ငြင်းဆန်သောကြောင့်ရှိပါတယ်။
မှ Harper ကိုဇား.
LOVE လက်ကောက်သည်လက်ကောက်ဝတ်တွင်သော့များတပ်ထားသောပြားချပ်ချပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး ဝက်အူလှည့နှင့်အတူဆွဲထား, အအပိုင်းအစခွဲလို့မရတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသန့်ရှင်းစေရန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒီပုံထဲကတစ်ခုက 18K ပန်းရောင်ရွှေရောင်ဖြစ်ပြီးစိန် ၄ လုံးနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့။
ကွင်းသုံးခု - 18K ပန်းရောင်ရွှေတစ်လုံး၊ အညိုရောင်ကြွေတစ်လုံးနှင့်စိန်ပါသည့် 18K ပန်းရောင်ရွှေလက်စွပ်တစ်လုံး။
Maison ၏နောက်ထပ်စုဆောင်းမှုသင်္ကေတဖြစ်သည် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူက de Cartier ။
တီထွင်မှုတစ်ခုသည်ရွှေအရောင်သုံးမျိုးဖြင့်တီးဝိုင်းသုံးခုကိုသဟဇာတဖြစ်စေပြီး ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် Louis Cartier တီထွင်ခဲ့သော Jean Cocteau သည်၎င်းအပိုင်းကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကဗျာဆရာနေတဲ့စာပေလောကရဲ့အလင်းရောင်ထဲမှာဝိုင်းရံထားတဲ့လက်စွပ်ဟာလျင်မြန်စွာအထင်ကရအဆင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘဝတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးသည့်ခံစားမှုများနှင့်တန်ဖိုးများကိုပုံဆောင်သည့်အရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရွှေအမျိုးအစားသုံးမျိုး - ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ပန်းရောင်၊ သစ္စာရှိမှုအတွက်အဝါရောင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအတွက်အဖြူ - ဘဝ၏အမှတ်ရစရာအချစ်များကိုအချိန်ကုန်ခံဒီဇိုင်းဖြင့်မြှုပ်နှံထားသည်။
Trinity Heart လက်ကောက်၊ 18K3ရွှေပန်းပွင့်၊ ပန်းရောင် - ရွှေကွင်းဆက်။
အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင်စိန်များပါရှိသည်။ ၁၈ ကီလို (၃) ရွှေရွှေလက်စွပ်တွင်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏အဖိုးတန်သောအနက်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီရောင်သေတ္တာသည်စစ်မှန်သောချိုမြပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောရတနာများကဲ့သို့သောအစစ်အမှန်ရတနာများကိုမပေးနိုင်ပါ Caresse d'Orchidées ပုတီးသို့မဟုတ် Diamant Légers de Cartier လက်စွပ်။
အဆိုပါ သစ်ခွ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောappealတ္ဆွဲအားကိုပြသသည့်အနေဖြင့် Cartier တွင်တန်ဖိုးရှိသောပန်းတစ်ပွင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မခိုင်မြဲမှုကို Cartier ၏လိမ္မာပါးနပ်သောလက်မှုအနုပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပွင့်ချပ်များကိုအကောင်းဆုံးသောအဖိုးတန်ပစ္စည်းများမှထွင်းထုထားသည်။ ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်၊ ထိုအချိန်မှစ၍ Cartier လက်ဝတ်ရတနာများတွင်စံပြပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Caresse d'Orchidéesနားကပ် - ပန်းရောင်နီလာများနှင့်စိန်များတပ်ဆင်ထားသည့် 18K ပန်းရောင်ရွှေနားကပ်။
အဆိုပါ Diamants Légers စုဆောင်းမှုသည်အလှည့်တွင်ကျွမ်းကျင်သောကျောက်မျက်ရတနာများကရွေးချယ်ပြီးရွှေရောင်ချည်နှောင်ခြင်းများပေါ်တွင်သတ်မှတ်ထားသောထူးခြားသောစိန်များမှတောက်ပသောကြော့ရှင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဤတွင်လက်စွပ်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
Cartier ကိုကျွန်ုပ်အများဆုံးနှစ်သက်သည်မှာ၎င်း၏အနုပညာလက်ရာအမှတ်အသား၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်သီးသန့်သီးသန့်အမှတ်အသားသာမကဤအဖြစ်အပျက်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များအားလုံး၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်၎င်းဖန်တီးမှုများကိုပြသခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ချစ်မြတ်နိုးသူများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လျက်ရှိ၏။
သင်ဤ box လေးကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ရတနာ၏အကြောင်းအရင်းမှာရတနာ၏အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည့်သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ CC
ပို့သည် ဂလော်ဒီယာ Carletti, အချိန်မှတဆင့်ရတနာ။ ၏ပစ္စည်းယဉ်ကျေး Cartier.
Tags:Caresse d'Orchidées • Cartier • Coeur Torsadé • Diamants Légers • နှလုံး • အိုင်ကွန် • အထင်ကရ • ချစ်ခြင်းမေတ္တာ • သစ်ခွ • အနီရောင်သေတ္တာ • စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း • စတိဗ် McQueen က • ထာဝစဉ် • သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ • ချစ်သူများနေ့
မှတ်ချက်0ခုRed Box ထဲမှာဘာတွေပါလဲ။"